1954-1964 Evinrude Johnson 5.5 HP - History | Outboard Boat Motor Mmezi
1954-1964 Evinrude Johnson 5.5 HP - History
"Sweetest-agba ọsọ Johnsons mgbe!"
A na-ere ahịa ụgbọ mmiri Johnson Johnson Seahorse 5.5 na 7.5 dịka ezigbo ụgbọ mmiri na-akụ azụ. Ha na-ere ndị a site na ọtụtụ na-azụ azụ, n'ogige, na ntụrụndụ na Wisconsin, Minnesota, na Canada ebe Ralph Evinrude na ndị ọzọ OMC ọrụ na-achọ iji oge. A wuru ihe ndị a ka ha bụrụ mkpọmkpọ ebe, ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, dị jụụ, na-agba ọsọ. N'ebe a na-agbanyeghị gas tank nke ga - ejide mmanụ ọkụ ka ọ ghara ịkụnye pike, ọdọ mmiri, ma ọ bụ walleye ogologo ụbọchị dum. Ọ nwere onye na-atụgharị nsị nke gbanwere nke ọma n'agbata n'ihu, na-anọpụ iche ma laa azụ. Ụgbọala a bụ n'ezie ihe ọkụkụ n'etiti ìgwè mmadụ azu azu. Ndị mmadụ ga-aga n'ebe ugwu maka njem ịkụ azụ dị egwu na otu n'ime ọtụtụ ebe obibi ebe ha nwere ike ịgbazite ụlọ na otu ụgbọ mmiri maka otu izu ma ọ bụ abụọ na azụ, azụ, azụ. Ohere inweta ụgbọ mmiri gị ga-enwe otu n'ime ndị a Johnson Seahorse bụ ndị ga-arụ ọrụ ya ma mee ka ị banye ọdọ mmiri na enweghị nsogbu. Na Wisconsin, ọ bụ na omenala obodo nke mara mma nke ukwuu onye ọ bụla nwere okpokoro okpukpu ebe ebe ọdọ mmiri dị. Inwe otu ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri 14 ma ọ bụ 16-ụkwụ aluminum "V" na ụgbọ mmiri Johnson Seahorse bụ ihe nkịtị. Na 50 na 60's Jonnson / Evinrude ma ọ bụ OMC bụ onye na-azụ ahịa n'ọdụ ụgbọ mmiri na Mercury bụ nke dị anya nke abụọ. OMC na-eto eto dị ka ọnyà ma na-achọ ka ụgbọala ha na-agbawa. Johnson Seahorse bụ aha na onye ọ bụla maara, tụkwasịrị obi, ma chọọ. Ihe ụgbọ mmiri na-agba na-etolite gburugburu ebe ugwu na gburugburu obodo ahụ. OMC ga-abụ na ihe ngosi ndị a niile dịka onye isi ahịa Johnson motors na otu mpaghara na Evinrude na-esote. OMC nwere ụfọdụ ezigbo ndị mgbasa ozi nke mepụtara mgbasa ozi ndị na-agba ọsọ na Mechanics Mechanics, Field & Stream, na akwụkwọ ndị ọzọ n'èzí, karịsịa n'oge ọnwa oyi, ka ị ga-ebido na njikere maka oge ịkụ azụ iji malite na oge opupu ihe ubi. E wezụga ịbụ ezigbo ụgbọala ịkụ azụ, ndị a Johnson motors mara mma dịka ị pụrụ ịhụ na mgbasa ozi. Mkpụrụ ụzụ ndị ejiji azụ na-abụkarị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mana ụrọ e rere ndị mmadụ nwere ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mma na agba ọrụ na-ahụ na ụgbọ ala. Nke a nwere ike ịbụ na OMC na-eru nso ụbọchị ncheta 50th ha.